Ithemu Quad-Core ijwayelekile Baningi abantu abathanda ubuchwepheshe digital. Kuyathakazelisa ngokuyinhloko ngoba isetshenziswa ngetinhlobo letehlukene tetimongcondvo. Lisho ukuthini leli umqondo? Yini Brands abakhiqizi sikusebenzise njalo akhiqizwa kwamagama zikagesi? Ingabe ikhona amadivayisi e-Russia, okuyiwona Leligama lisetshenziswa?
Quad-Core - Iyini? Symbol uphawu kudivayisi noma igama lilonke amadivayisi, ngokuhlanganisa izici ezithile? Singasho ukuthi kokubili. Iqiniso lokuthi leli qiniso has a nguqulo oqondile - "core ezine". Kulokhu, izwi lokuqala, isikwele, - yesiLatin, kanti eyesibili, nengaphakathi - IsiZulu.
Leli gama, ngakho-ke, okukhulunywe izingxenye njengoba electronic (cishe njalo - zonke izilimi), okuyinto anemisila cores ezine. Nokho, ukuze cabanga umqondo liyasetshenziswa aziwayo brand ethize chips. Lapho kungenzeka ezinye uhlobo izinguquko ukulandelana ngayinye amazwi ephambili. Ngokwesibonelo, kukhona processor ezifana efana Intel Core 2 Quad. Isibalo nuclei e chip yalolu hlobo inquma inani kanyekanye idatha ukusakaza ukuthi zingahlungwa chip. Okungukuthi, uhlelo lwekhompyutha ungakwazi ukwaba izibalo yangaphakathi ukuze basuke zilandelwa ngu processor kanyekanye ngaphakathi ukusakaza eziningi, futhi eqinisweni - ngokushesha.
Kufanele kuphawulwe ukuthi Russian ulimi isikhala inthanethi, futhi ngolimi lwesiNgisi, futhi, igama elithi Quad-Core kuyinto isiqu umkhiqizo ikhomponethi elekthronikhi asetshenziswa njalo. Ngakho-ke singasho ukuthi nomaphi lapho sizwa noma ufunde eside, it cishe isetshenziswa umongo chip isikwele-core. Lokhu kungaba processor ezifana Intel Quad-Core noma uhlobo oluthile idivayisi yeselula.
4 nucleus: incazelo fineness kwegama elithi
Yiqiniso, enkulumweni emuva IT-ongoti, kokubili Russian angaphandle, umqondo Quad-Core isetshenziswa idivayisi isikwele ngokomthetho, okungukuthi, ngaphandle ireferensi chip oluthile noma idivayisi elihlangabezana sasivumela njalo. Ngokuvamile, yebo, ngenxa ukusondela enkulu ngokolimi ukuba leli gama lisetshenziswe angaPhandle ke. In the version isiRashiya, ngokuvamile esetshenziselwa nguqulo oqondile - "isikwele".
Umsebenzi wethu - ukufunda umqondo olucutshungulwayo esimeningcondvo ukusebenza brand ethize amadivayisi kanye nezinto zikagesi. Nokho, lapho kufanele khona, sizosebenzisa igama elithi embuzweni ifomu lamahhala - ku imikhuba angaphandle. Asiqale isifundo sethu encane nge Intel Core 2 Quad, enamandla ye-quad-core processor I-PC.
Abane version umnyombo Intel
Sifunda ulwazi oluyisisekelo mayelana chip. Igama lakhe eliphelele - Intel Core 2 Quad Q6600. Ngezinye izikhathi kukhona isikhathi esifitjhani begodu kancane Ushintshe igama wokugaya. Kwazwakala njengomoya omkhulu Core Quad Q6600. Leli akulona imodeli eyodwa chip, futhi lonke uchungechunge. It yadalwa ngezinsuku 2007-2011, kodwa ekugcineni lizinga lekuphumelela ngayinye izilimi okuqondene ku lonke ngempela aneliseke kakhulu izidingo ezifanele umsebenzisi lanamuhla. Ngaphezu kwalokho, ezinye izinhlobo chips, ekhishwe ngo kohlaka walo mugqa ngaphambi kwesikhathi babo ngezinga elithile. Ngemva nje kancane kwalokho sizobona ukuthi kungani.
Uhlelo Intel Quad-Core uchungechunge akhiqizwa uhla 2,33-3,2 GHz iwashi imvamisa, lapho ubuchwepheshe yasetshenziselwa 65 no-45 NM. Chips ayenendawo cores ezine ngokuhlanganisa ezimbili eyodwa iphakethe uhlobo zinhlayiya Core 2 Duo. Eceleni ngamunye futhi usethe ukuba ezimbili-core chips. Ingabe singasho ukuthi wokugaya Quad-Core-aspect lokukhiqiza ngokulingana uvelile ngaphambi chip Core 2 Duo? Ukwandiswa uma umthamo wayo langempela kabili phezu kuphindaphindwe kabili inani cores? Kukhona mqondo wokuthi ukuthenga CPU uhlobo Quad-Core - kuyinto efana ukuthola icebo lokumaketha: iningi imidlalo yesimanje kanye isofthiwe namanje akasebenzisi 4 cores. Kungakhathaliseki ukuthi kuyafaneleka?
cores ezine kuqhathaniswa ezimbili: uma umkhiqizo ukukhula ungokoqobo?
Qhathanisa Quad-Core processor kusukela Intel 'nabazalwane kancane "yayo nge cores ezimbili uqaphe ngomqondo ukuthi izilimi nge izakhiwo ngokuyinhloko efanayo ukuze ukhethe ukuqhathanisa efanele izici nokusebenza. Omunye nenqubo kungenzeka - ukuthi umehluko abalulekile kuphela kwaba nenani cores. Enye inkomba kungenzeka - ukufana kwamazwi amanani. ezithakazelisayo Njalo ukunquma ukuthi yiziphi izilimi ezimbili: Quad-Core (core 4), noma omunye ukuthi ine kabili isibalo engezansi rate idatha ukusakaza okwenziwa ngesikhathi ngentengo efanayo ukuze ziphumelele nakakhulu.
Awunankinga yokwenze njalo injongo, njengoba kwaphawula u-ezinye IT-ochwepheshe, chips abanjalo bangabaphostoli isikwele-core Core 2 Quad Q9300, kanye layo "omncane ezimbili-core" Core 2 Duo E8500. Kuvele Eqinisweni ezithakazelisayo wukuthi we Duo Quad-Core intengo cishe okufanayo - ruble mayelana 7000. Quad chip usebenza based Yorkfield ubuchwepheshe, it is wabulawelwa izakhiwo 45 NM. imvamisa Okuzisholo - 2.5 GHz, overclocked - 3.3 GHz. processor Dual kusuka Intel usebenza Wolfdale core izakhiwo - 45 NM, imvamisa iwashi - 3.1 GHz. Lokho asifani intengo chips amabili, kodwa futhi ezinye izici kuphela.
Ochwepheshe baye bazama uqhathanise ukusebenza la izilimi ezimbili imidlalo nezinhlelo, sokulingisa kubo futhi ngesikhathi esifanayo ukulinganisa isivinini processing idatha, kwezinye amayunithi. Ngo imidlalo efana, isibonelo, ukudedelana, futhi Call of Duty 4 th inguqulo, kokubili izilimi yabonisa cishe kulingana, njengoba kwaphawula u-IT-ongoti, ukuhlola chips imiphumela. Ngaphezu kwalokho, ngo-izindlela ezithile (isib, nge nesinqumo umpheme okusezingeni eliphezulu), salotshwa ukuthi i-chip ezimbili-core wakwazi ukundlula yakhe "umzalwane." Ezinye izazi ziye kodwa wakwazi ukuthola imidlalo lapho isikwele-core processor kusukela Intel Kwakuthé ukukhiqiza kakhulu, ngokwesibonelo, ukuthi Umhlaba okungqubuzanayo.
Ngakho, singaphetha ngokuthi chip uhlobo Quad-Core imidlalo alisiniketi inzuzo ecace ngale ndlela uma kuqhathaniswa ezimbili-core onobuhle.
I Umbuso indawo esisebenzayo 4 cores
Kwezinye izimo, sebenzisa Quad-Core ezifanele? Ochwepheshe bakholelwa ukuthi yimuphi ukwanda processor ukusebenza ngenxa cores ezengeziwe encike ngqo kwi kanjani bazivumelanisa "ibhonasi" isimiso esinjalo umdlalo nokuthi umsebenzisi ugijima. Uma lelisu izindikimba amaningi Computing zisakazwe, leli cores ngaphezulu, le ngokushesha uzoya ukusebenza. Processor uhlobo Quad-Core - kungokuthile! Kodwa uma lokhu ayisetshenziswa ke cores 4 kukhona alunamsebenzi. Nokho, njengoba kuphawulwe ngabaningi IT-ongoti, isofthiwe lokusebenza emakethe nekhompyutha imidlalo kukhona imikhiqizo eminingi, ingashintshwa yona isikwele-core izakhiwo. Futhi ngakho ukuthenga uhlobo ezifanele processor kungenzeka unombono esizayo.
Ngenhla sishilo ukuthi chips Intel nge 4 cores e ngaphambi kwesikhathi babo ngandlela-thile. Ngempela, kuze kube ngomzuzu wokugcina zohlelo umdlalo nokuthi ngabe asizakale ngokugcwele ukusakaza eziningi, babemi ukungasebenzisi. Kodwa labo electronics abathanda owangena isikwele-core processor eminyakeni embalwa edlule, kungaba ukuhlola netinsita letikhona zokusebenza lanamuhla.
Four umongo AMD
Intel Yiqiniso, akuyona emakethe esinakho-aspect ukwakhiwa kanye yokuthengisa of isikwele-core izilimi. Esincintisana abaseduze lenkampani, AMD, nawo owabhalwa umbiko wakhe Quad-Core. Hlobo luni chip angabhekwa njengesibonelo? Izimo zethu zihluke kakhulu efanelekayo processor AMD imodeli A10-4500M. It kungokwalabo esigabeni Mobile, wenza ngesisekelo ubuchwepheshe zintathu. Ezimakethe le chip likhona kusukela 2012. Qaphela ukuthi kukhiqizwa ngesisekelo senqubo 32 NM. Processor nayo ifakwe ihluzo zayo futhi inkumbulo isilawuli ngeziteshi ezimbili.
Proposed AMD Quad-Core yakhiwa ngaleyo ndlela ikhenela ezine wabulawelwa izakhiwo isisekelo Piledriver. Kodwa ochwepheshe bathi kufanele bathi wokugaya kungenziwa kubhekwe njengendlela isikwele nge ngezinga elithile conditionality. Iqiniso lokuthi cores ezimbili kuphela abakhona kulo, enze elintantayo iphuzu imisebenzi, kanti ababili abasebenza nge integers.
Njengoba IT-ongoti, umongo eyenziwe zintathu ubuchwepheshe, aphakeme ngokuya ukusebenza ngesisekelo izici ezifanele Bulldozer izakhiwo izilimi efakwe uchungechunge odlule. Phawula ukuthi, naphezu inani elikhulu cores, AMD ibahlomisé kubhekwe processor ukusebenza ukusheshisa module ngaphakathi ukusakaza olulodwa. Sikhuluma ubuchwepheshe ngokuthi Turbo Core (kule nguqulo wesithathu). Nokho, njengoba abanye abahlaziyi ukukholelwe, leveli yokuphelela kancane wawungaphansi ngesinqumo Turbo Boost, lakhiwa Intel, esiklanyelwe ukuxazulula izinkinga ezifanayo.
Ezinye izazi ziye wazama uqhathanise ukusebenza processor inikezwe ngezinalidi izixazululo wokuncintisana, lapho ngokwesiko ukusekela chips Intel. I Analogue abaseduze wezazi the Quad-Core AMD wafonela chip Intel Core i3-2310M, esekelwe Sandy Ibhuloho izakhiwo. Ekuhlolweni olwenziwa ochwepheshe, kokubili izilimi kwabonisa imiphumela cishe efanayo. Nokho, njengoba kwaphawula u-IT-ongoti, esakhelwe nokubika chip ihluzo subsystem uhlobo Radeon HD 7660G ungalenza ukubonisa imiphumela umxhwele ngaphezulu lokumadanisa isibonelo, ukuze ividiyo HD Graphics 4000, okuyinto kuveza Intel futhi afakwa processor eyenza ngaso Ivy Ibhuloho izakhiwo.
Yimaphi amanye chips ne cores ezine, AMD elikhishwe, singazibona? Abanye ochwepheshe ukhombe processor AMD le Phenom II le N930 X4. Yena, uyisibonelo umnyuziki isikwele-core, futhi lokhu naphezu kweqiniso lokuthi nguye omdala kunawe A10. Unyaka ka-womshini chip - 2010 th.
Abanye bathambekele kubhekwe izinhlu angaphandle chip ubizwa ngokuthi AMD Quad Core Processor Phenom N930. chip yokusebenza imvamisa - 2 GHz. Processor izakhiwo ukusebenza 45nm. Analogue bakhe abaseduze wezazi ebizwa ngokuthi Intel Core 2 Quad Q9000.
Yiqiniso kukhona inqwaba yezinye izinhlobo chips AMD Quad Core iprosesa. Bonke ngothi lwabo, njengoba kwaphawula u-IT-kwezazi, lo yokuncintisana kakhulu ubuchwepheshe izixazululo kusukela Intel. Nokho, umthetho ophathelene ukusebenza isikwele-core izilimi (okuyinto sibonile ngenhla, ngaphandle yokuthi isibalo esifanele izindikimba kufanele kugcinwe, ngaphezu kwakho konke, imidlalo ngokwabo futhi isicelo) lubalulekile nezalo AMD chips. Ngamandla abo, umnyombo 4 zingase zingabi usizo uma isofthiwe ayikwazi ukusebenzisa ngokugcwele kule nsiza zobuchwepheshe.
Four core: Made in Russia
Intel futhi AMD - abaholi emakethe emhlabeni izilimi ngoba PC, kodwa hhayi esinakho. Lezi zinhlangano abe esincintisana oqinile Russia - inkampani "MCST", chips lokuveza "Elbrus". Phakathi sha Russian chips akhiqizwa futhi isikwele-core onobuhle. ibizwa ngokuthi "Elbrus-4C". Entwasahlobo ka-2014 inkampani "MCST" kumemezela ukuzimisela ukuphetha chip ekukhiqizweni.
Kuyini lokhu inkampani ekhiqiza chips ezingaba, njengoba abaningi IT-ochwepheshe, ukuba imikhiqizo ukuncintisana ezivela brand eziholela? "MCST" uye abesebenza kusukela 1992. It yasungulwa e-Institute of Mechanics lesidze yaqanjwa S. A. Lebedeva. Ukuthuthukiswa ezihlobene computer izilimi futhi, ngokwezinga elithile laba isisekelo zobuchwepheshe ukwenziwa chips "Elbrus", zenzeka ngokoqobo nenkathi yamaSoviet. Institute ngesikhathi esifanayo ukudala futhi ukukhipha chips hhayi kuphela kodwa futhi ne-computing system agcwele, ezifana, isibonelo, "Elbrus 1KB." Lolusiko kuyinto esasebenza nanamuhla. Manje inkampani "MCST" ezikhiqizwa ngaphansi kwegama lomkhiqizo "Elbrus" zonke izilimi nje kuphela, kodwa futhi amakhompyutha.
Yiziphi izici lobuchwepheshe Russian Quad-Core? Processor "Elbrus-4C" lusebenza ku-64-bit izakhiwo. umongo ngamunye usebenza imvamisa of 800 MHz. It kuvela ukuthi imvamisa Imininingwane enikeziwe ukusetshenziswa zonke cores processor bengase bazikhandlele 3.2 GHz. Processor kusekelwe 65 nm ubuchwepheshe. Naphezu kweqiniso lokuthi kule umbandela ukuthuthukiswa Russian izixazululo phansi kunabaphostoli kusuka brand omhlaba anothile, ezifana namuhla, Intel silwenza chips Architecture 22 NM, jikelele ukusebenza chips "Elbrus-4C" kwezinye izinhlobo zezinkinga, abanye ochwepheshe bathi, kungaba ufana ukusebenza kwe-analog wabaholi umhlaba emakethe, ezifana, isibonelo, Intel I3 chips. Noma kunjalo, abaningi IT-ongoti aqaphele ukuthi processor "Elbrus-4C" - onamandla kunayo the izilimi Russian ekhiqizwa namuhla.
Four core lempi
Ochwepheshe abaningi banomuzwa wokuthi ukuba afeze ukuqhathanisa ngqo Russian isikwele-core processor analogs kusuka Intel futhi AMD akufaneleki ngokuphelele ngenxa umehluko imisebenzi eyenziwa yibo. Chips kusuka Intel futhi AMD bathole ngempumelelo isicelo yabo imvelo zomsebenzi. Ngakwelinye ihlangothi, kucatshangwa ukuthi wokugaya "Elbrus-4C" kudingeke ngaphambi zonke izakhiwo lempi bayoba. Iqiniso lokuthi ibutho kakhulu engathandeki ukusebenzisa electronics angaphandle ezenziwe. Iwusizo chip "MCST" ngoba amabutho ahlomile ngezinga elithile ngenxa yokuthi ukuthi kahle ingashintshwa ukuze lokushisa ukweqisa, ukuthi ezimweni, isibonelo, umsebenzi empini bengase esibalulekile ukuzinza zikagesi.
Nokho, njengoba kufakazelwa imithombo eminingana ulwazi, kungenzeka ukuthi processor "Elbrus-4C" izofakwa kumakhompyutha zenzelwe nje kuphela izinjongo kwezempi kodwa futhi ukusetshenziswa jikelele civil. Isobho okunjalo kakade athuthukile brand "MCST". Kusolwa ukuthi umugqa imikhiqizo evela enkampanini Russian uzoba khona njengoba amakhompuyutha ideskithophu format, kanye laptops. Amadivayisi izosebenza ngaphansi OS "Elbrus", wadala okusekelwe Linux. Ngokusho kochwepheshe abaningi, lokhu OS libhekene ngokuyinhloko ezingeni lelisetulu Ukuvikelwa ukulwa namagciwane ne-malware. isofthiwe Kufaka ezinikezwe ngedivayisi, ngeke nje kuphela kube izicelo umsebenzisi main, kodwa futhi ewusizo ithuluzi ukuthuthukiswa ukuze ochwepheshe amamojuli ethile izilimi izinhlelo ezivamile. Nokho, nama-computer sha Russian futhi alethe ithuba ukufaka zobuchwepheshe ye-Windows. Lena Sibonga kungenzeka ukuba ukusekelwa izilimi "Elbrus" ukuhambisana ukusakaza amakhodi elisetshenziswa Intel futhi AMD chips.
Ngakho, sahlola izici cores ezine-aspect of imishini Processors kusuka Intel, AMD "MCST". Kodwa, njengoba sishilo ekuqaleni kwalesi sihloko, Quad-Core - igama awasebenzi kuphela maqondana nalolu hlobo chip. Ingasetshenziselwa ngenxa yokuqamba ngisho yezingxenye ngamanye electronic amadivayisi ephezulu grade. Ukuze labo ingathiwa, isibonelo, idivayisi ezifana Android Quad-Core TV Ibhokisi. Yini-ke umele? Le divayisi ikuvumela ukubukela i-TV futhi okuqukethwe ezihlukahlukene multimedia ngokusebenzisa TV. Futhi ilawulwa Android OS. Kulesisimo-ke, i-Quad-Core - Iyini? Leli gama processor, okuyinto ifakwe idivayisi. Chip embuzweni, - Cortex A9 Quad-Core. Android - isistimu yokusebenza ukuthi livame ukusetshenziswa ngokuhlanganyela chip ngaphansi kwalesi brand.
Cabangela izici eziyisisekelo zedivayisi. CPU imvamisa, okuyinto umkhiqizo siye kukhonjisiwe ngenhla - 1.8 GHz. Inani RAM, okuyinto ifakwe idivayisi - 2 GB. Esakhelwe ngaphakathi flash inkumbulo - 8 GB, ungakwazi ukufaka isengezo angafika ku-32 GB. Kukhona ukwesekwa Bluetooth version 4. Unganika amandla uxhumano nge-Wi-Fi. Kunezindlela Slots ezimbalwa - USB, microUSB, OTG, yocezuningi. Idivayisi isebenzisa inguqulo kahle entsha ye-Android - 4.2.2. Umsebenzisi Ngaleyo ndlela, kungaba efakwe kudivayisi izicelo eziphambili ezifana MX Player noma, isibonelo, AceStream. Ungaxhuma zangaphandle oshayelayo disk.
Idivayisi, njengoba kwaphawula u-ezinye izazi kanye nabasebenzisi, usebenza ngokwanele ngokushesha. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi labo enesandla core 4, Inama. Injongo eyinhloko yawo kudivayisi - ukukhishwa ngesikhathi esisodwa imisebenzi eminingana: Igajethi mobile, amabhokisi usethe-top, umphathi woxhumano. Yena enquma ke, njengoba kwaphawula u-IT-ongoti, hhayi okubi, futhi 4 cores - lingesona isici lokugcina izinga zedivayisi.
Qaphela ukuthi okungenhla akuyona idivayisi kuphela asebenzisa i-Android, okuyinto ifakwe uhlobo CPU Quad-Core. 3G-tablet, amafoni smart ehlukahlukene yasakazwa lemikhiqizo nazo ngokuya ukuthola eliphezulu ukusebenza chips ne 4 cores. Kodwa, njengoba kwaba njalo endabeni ka-chips PC, kakhulu ngokuya yanda ngesivinini kanye operation eselula incike izinhlelo ukusebenzisa kubo. Uma ukusebenza ngo izicelo ezifanele ukusetshenziswa ngempumelelo sendikimba amaningi, 4 nucleus ukunikeza uzuza appreciable. Uma kungenjalo, ukwanda umkhiqizo kungase kungabi ngakho palpable, sengathi igajethi iye ifakwe processor kancane yempucuko.
Ngakho, umthetho ukuthi umongo 4 ziyinzuzo kuphela uma idivayisi uhlelo efanayo, futhi kubalulekile kumadivayisi eselula. Ngesikhathi esifanayo, abahlaziyi bathi, ezinye yesimanje IT-brand jikelele sebeqala cabanga ukukhululwa kwe-software can ukusetshenziswa ngempumelelo ngokwanele 4 cores kwi computer futhi zonke izilimi mobile njengoba umsebenzi kuqala.
Ngokusho kodokotela abathile, lingasethwa lesinqumo kanye nosayizi zedivayisi ukubuka kukhona uhlobo chip Quad-Core. -10 intshi ukubonisa kungabangela isivinini kancane ephakeme kunaleyo, bathi, omunye ogama idayagonali nengxenye izikhathi ezingaphezu. Nakuba, ngokusho kongoti, lokhu kungase kube kubangelwe degree of mthwalo izinto eziningi kangaka lapha core processor, kodwa kumadivayisi eselula ihluzo subsystem.
Kuyoze kube nini abantu ukulethwa nokuthi kungaba ngokushesha